दाङमा हेर्नुस्टि, कटक बनाउदा झोलुङ्गे पुलबाट ख’सेपछि, त्यही ठाउँ पुगेर भोजराजले ल्याए प्रत्यक्ष’दर्शी (जनचेतनाका लागि सेयर गराै) | Public 24Khabar
Home News दाङमा हेर्नुस्टि, कटक बनाउदा झोलुङ्गे पुलबाट ख’सेपछि, त्यही ठाउँ पुगेर भोजराजले ल्याए...
दाङमा हेर्नुस्टि, कटक बनाउदा झोलुङ्गे पुलबाट ख’सेपछि, त्यही ठाउँ पुगेर भोजराजले ल्याए प्रत्यक्ष’दर्शी (जनचेतनाका लागि सेयर गराै)
दाङमा हेर्नुस्टि, कटक बनाउदा झोलुङ्गे पुलबाट ख’सेपछि, त्यही ठाउँ पुगेर भोजराजले ल्याए प्रत्यक्ष’दर्शी
कृष्णप्रसाद कोइराला नेपालका समाजसुधारक तथा राजनीतिज्ञ थिए । उनका ३ छोराहरू मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बने ।
कृष्णप्रसादका ३ छोरामध्ये कान्छा थिए, गिरिजाप्रसाद । उनै गिरिजाप्रसादका मिल्ने साथी थिए– विश्वबन्धु थापा । उसो त थापालाई कृष्णप्रसादले छोराजस्तै मान्थे ।
एक दिनको कुरा हो–कृष्णप्रसादले छोरा गिरिजाप्रसाद र छोराजस्तै मानेका विश्वबन्धु थापालाई खेल्नका लागि साइकल किनिदिए । साइकल रोटेशन (पालैपालौ) अनुसार चलाउनुपथ्र्यो यी दुईले । गिरिजाप्रसादले एक दिन साइकल पालोअनुसार विश्वबन्धुलाई हस्तान्तरण गर्नु त परै जाओस् । उनले पर खेतको डिलमा लगेर एकाएक साइकललाई कच्याककुच्चुक बनाएर फालिदिए । कृष्णप्रसादले के गरेको बाबु तैँले भनेर प्रश्न गर्दा मैले चढ्न सँधै चढ्न नपाएपछि त्यो साइकलको के काम ? भन्दै उनले कृष्ण प्रसादलाई उत्तर दिए ।
त्यतिबेला गिरिजाप्रसादको साइकलवादी चरित्रको आफै, रमाऔं, आफै रवाफ देखाउँ भन्ने नै थियो । आफ्नो हालीमुहाली नहुने भएपछि त्यो साइकलको के काम ? भन्ने कुनियत त देखियो नै त्यही कुनियतले साइकलनै ध्वस्त हुन पुग्यो ।
गिरिजाप्रसादको त्यही साइकलवादी चरित्र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छन् । हताठ र आवेगमा ओलीले गरेको यो निर्णयको परिणाम भोलिका दिनमा निश्चय नै देखिने त छ नै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कतिसम्म फोहोरी खेल हुँदोरहेछ भन्ने एकपटक पुनः प्रमाणित भएको छ ।
दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार, त्यसमाथि जहाँबाट उनी निर्वाचित भएर देशलाई समृद्ध बनाउने कसम खाँदै अघि बढे, त्यसलाई चटक्कै भुलेर उनले आफ्ना बाचालाई पनि रसातलमा पुर्याएका छन् । अर्थात गिरिजाप्रसादले साइकल कच्याककुच्चुक पारेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई कच्याककुचुक पार्न विघटनको वाटोतिर लागेका छन् । यो ओलीको साइकलवादी प्रवृत्ति हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि थियो । जसका कारण उनी अल्पमतमा पर्दै पदबाटै राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आएपछि संसद विघटनको निर्णयमा ओली पुगेका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन ।
हुकुमीशैलीमा पार्टी चलाएको, राजनीतिक नियुक्तिमा मनपरी गरेको, पार्टी निर्णय नमानेको जस्ता आरोप लगाउँदै सचिवालयका बहुमत सदस्य ओलीको विपक्षमा रहँदै आएका थिए । निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटन गर्नु कीमार्थ स्वीकार्य छैन । स्वार्थपूर्ति र व्यक्तिगत सनकले देश अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढ्दै गएको छ नै यस खालको निर्णयबाट जनमतमाथिको कुठाराघात पनि भएको छ ।
ओलीको यो कदम प्रतिगमनकारी छ, संविधानविद्हरुका अनुसार गैरसंवैधानिक पनि छ । अझै पनि ढिला भएको छैन, साँच्चै ओली प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो र साँच्चै आफ्नो पदीय गरिमा बढाउने हो भने राष्ट्रपतिले उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यो राष्ट्रपतिको पनि परीक्षाको घडी हो ।
Previous articleमेरा दुई मुनालाई हुर्काउनु छ म बाँच्न चाहान्छु सम्भव हुनेले सहयोग नहुनेसँग सेयर अपिल
Next articleसंसद विघटन घोष’णा लगतै ब’बाल, भर्खरै ड’रलाग्दो भयो हेर्नुहोस्, ग’म्भीर संक’टमा फ’स्यो देश